Waraaqaha Qaabka Cascading | Martech Zone
Sabti, Sebtember 9, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan ku dhacay wax weyn post maanta at Attackr.com oo ka hadlay nadiifinta CSS-kaaga. Xawaaladda 'Cascading Style Sheets' waa faa iido aan caadi aheyn oo lagu hagaajinayo laguna qaabeynayo websaydhkaaga maxaa yeelay waxay kala soocdaa lakabka muuqaalka ah ee bartaada iyo HTML-ka dhabta ah ama koodhka ka dambeeya bartaada. Xaashida qaabka waxaa aqriya biraawsarka, markaa waan hubaa inay jiraan faa'iidooyin waaweyn oo loogu talagalay websaydhada taraafikada badan, maaddaama laga shaqeynayo dhammaan muuqaalka boggaaga loo daayo biraawsarka halkii laga heli lahaa server-ka.
CSS sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku sameyso isbeddel muuqaal ah 'duulimaadka' boggaaga adigoon wax ka beddelin HTML ama faylashaada dambe. Marka… beddelida adeegsadahaaga adeegsigu uma baahna dib u dhiska dalabkaaga, waxaad si fudud ugu dhejisaa faylka cusub ee CSS. CSS 2 xitaa waxay ku qaadaysaa talaabo dheeraad ah… iyadoo la siinayo waxyaabo badan oo muuqaal wanaajin ah, oo ay ku jiraan isbeddelada qoraalka dhabta ah.
Qalabka aan maanta adeegsaday wuxuu ahaa CSTidy. Waxaan soo dejiyey nooca dalabka, oo leh isku xidhka taliska. Kaliya ma jarin cabirka feylkeyga, waxay sidoo kale abaabushay xaashida qaab-dhismeedka si ay u fududaato in la akhriyo. Waa codsi yar oo aad u fiican! Sidoo kale, waxaa jira nooc khadka tooska ah hadda haddii aadan rabin inaad soo degsato barnaamij.
CSSTidy's CSS Cheatheet
Zen ee naqshadeynta CSS - buug ku saleysan websaydhka caanka ah Beerta CSS Zen.
StyleMaster - laga bilaabo WestCiv, kani waa tifaftire CSS aad u adag. Websaydhku wuxuu leeyahay talooyin wanaagsan sidoo kale!
W3School ku saabsan CSS
HTML Caawi CSS
Fadlan sidoo kale ku dar kheyraadkaaga Waxaan si gaar ah u xiiseynayaa horumarka CSS, iyo waliba taageerada biraawsarka. Waan ogahay in Firefox ay taageerto CSS2, laakiin wax badan kamaan maqal taageerada IE7 ee CSS2.
Waxyaabaha aad jeceshahay miyay ku xisaabtamaan farsamada?
Sep 24, 2006 at 10: 37 PM
Waxaan ka helay soo galid kale weyn Qorista Pro on CSS Dhiirigelinta.